Google လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုရဲ့ သတိပေးချက်ကြောင့် ကျွန်မဘလော့ဖွင့်ထားတဲ့ အီးမေးလ်ကို Log in ပြန်ဝင်ရတယ်...။ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေ လျှို့ဝှက်နံပါတ်တွေအကုန်ပြန်ဖြည့်ခိုင်းတယ်....။ ပြီးတော့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အရံအီးမေးလ်တစ်ခုပေါ်လာတော့ ဒီဘလော့ကိုစပြီးဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးထားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်ကို သတိရမိသွားစေခဲ့တယ်....။ အရံအီးမေးလ်က သူ့မေးလ်ဖြစ်နေတာကိုး....။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကတည်းက ကျွန်မစာရေးတာဝါသနာပါလို့ ဒီဘလော့လေးကို သူအမှတ်တရဆောက်ပေးခဲ့တာ....။ ခုဆို ကျွန်မစာစရေးတဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈ ကနေတွက်ရင် ကျွန်မရဲ့ ''မိုးငွေ့နှင့်အတူ"ဘလော့လေး (၁၂)ပြည့်သွားခဲ့ပြီ....။ Time flies နော်....အချိန်တွေကုန်လွန်တာ သိပ်မြန်တာပဲ.....။ "ခေါင်" စိတ်နှလုံးနဲ့ရင်းပြီး ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ "မိုးငွေနှင့်အတူ"ဘလော့လေးကို ကျွန်မတစ်သက်လုံး အမြတ်တနိုးနဲ့ ထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ...။ ဒီဘလော့လေးမှာ ပို့စ်တစ်ခုတင်တိုင်း စကားလုံးတစ်ခုရေးချတိုင်း ခေါင့်စေတနာတွေကို အမြဲအမှတ်ရနေမှာပါ....။ ခုလည်း ဒီပို့စ်လေးနဲ့ အမှတ်ရစွာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်....။
ဒီဇင်ဘာဟာ ကျွန်မအတွက်အမှတ်ရစရာတွေအများကြီးပဲ...။ မိုးငွေနှင့်အတူ ဘလော့ရဲ့ ဇာတ်လိုက်လေးဖြစ်တဲ့ အိန်ဂျယ်ရဲ့ Sweet December စာစုတွေရှိတယ်...။ ခရစ္စမတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေ New Year နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်တွေ နှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အက်ဆေးတွေအများကြီး နဲ့ သီချင်းခံစားမှုတွေ ရုပ်ရှင်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့(၁၁)နှစ်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလတိုင်းတွေမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်...။ လင့်ပြန်မချပေးတော့ဘူးနော်....။ ဒီဇင်ဘာလတွေမှာ သွားရှာဖတ်လို့ရပါတယ် မဖတ်ရသေးတဲ့သူများအတွက်က....။
အားလုံး လာမယ့် ၂၀၂၁ မှာ ကပ်ရောဂါကင်းဝေးပြီး စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ အသစ်ကပြန်စတဲ့ စီးပွားရေး လူမှုရေး အချစ်ရေးတွေအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်....။
Posted by Cameron at 12:46 No comments:
လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်နှစ်ကတည်းက Ariana Grande ပြန်ဆိုထားတဲ့ Last Christmas သီချင်းကို အခု Christmas နီးတော့ Joox ကနေ ပြန်နားထောင်ရတယ် သူ့ version လေးလည်းကောင်းတယ်.....။ အပေါ်ဆုံးတစ်ပိုဒ် စာသားထပ်ဖြည့်ထားတာလေးလည်း ချစ်စရာ....။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၁၉ Christmas နေ့မှာပဲ Universal Picture ကထုတ်လုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးတစ်ကား နောက်ဆုံးရုံတင်ရက်လေးမှာ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ Last Christmas ရုပ်ရှင်လေးကို လွမ်းမိသွားခဲ့တယ်.....။ ဒီနှစ်တော့ ထူးထူးခြားခြား အသစ်လည်းမရှိတော့ အဲကားလေးကိုပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်.....။
မနှစ်က ဒီဇင်ဘာမှာ ဒီပို့စ်လေး Last Christmas တင်ခဲ့တယ် ပြန်ဖတ်ချင်သူများအတွက်ပါ :)
I'll give it to someone special, oh, yeah, yeah
🎼🎵♬Merry Christmas to you all 🎼🎵♬
Posted by Cameron at 12:08 No comments:
My Vitamins (Second wave).....
ပထမလှိုင်း Home Stay တုန်းက အများဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက သီချင်းနားထောင်တာ....။ Joox ထဲဝင်မွှေပြီး တက်သစ်စ Rock နဲ့ Hip hop အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကို တော်တော်များများနားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်....။ ခု ဒုတိယလှိုင်းမှာအများဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက.... You Tube ကြည့်တယ်....။ You Tube က ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်....။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ဖဘမဖွင့်ထားတော့ soulmateက ကျွန်မပျင်းမှာစိုးလို့ သူ့အကောင့်ပေးသုံးထားတာနဲ့ သူ့ထဲက ဖဘ video လေးတွေကို အများကြီးဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်....။ ဖဘကို ခုမှပြန်ဝင်ကြည့်ဖြစ်တော့ ကျွန်မဟာ ခုခေတ်စကားအရ တာဇံဖြစ်ချင်ဖြစ်နေဉီးမှာမို့ သိပြီးသားအကြောင်းအရာများကို လာပြောမိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့....။
Hit အဖြစ်ဆုံးက ဖြူဖြူထွေး တစ်နေ့ကို ကြော်ငြာအနည်းဆုံးတစ်ခုနှုန်းနဲ့ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဝင်ငွေအရှာနိုင်ဆုံး အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု လုံ့လဝီရိယရှိမှု လူကြီးသူမအပေါ်ဂါရဝထားနိုင်မှု လူလူချင်းစာနာသနားတတ်ပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေက သိပ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်....။ ပြီးတော့ ကျွန်မ ဒုတိယအများဆုံးကြည့်ဖြစ်တာက မာမီကွတ်လို့ခေါ်တဲ့ ရှင်ငြိမ်းမယ်ရဲ့ ကလေးတွေရဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်လေးတွေကို live လွှင့်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေပါ....။ ကျွန်မက ပင်ကိုယ် ကလေးတွေကိုချစ်တတ်တော့... မာမီကွတ်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ကလေးတွေကို တစ်နေ့တစ်နေ့ကြည့်မဝဘူး....။ MUMMY COOK FOUNDATION က စွန့်ပစ်ခံကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ ကလေးတွေကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့နေရာလေးပါ...။ မရှင်ငြိမ်းမယ်က သူကိုယ်တိုင်အပိုင်မွေးထားတဲ့ကလေးအယောက်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိပါတယ်....ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ ကိုယ်ဝန်သည်ပေါင်း ငါးရာကျော်ကို ကယ်တင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ပါ....။ ကိုယ်ဝန်သည်တွေကတော့ သူ့ဆီကလေးလာမွေးတဲ့အချိန်လေးပဲနေကြတာပါ....။ သူက မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာမဟုတ်ပါဘူး....။ ရှင်ငြိမ်းမယ်က တကယ့် သံမဏိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ....။ အဲက ကလေးလေးတွေကို တစ်နေ့ကျ လိုအပ်တာလေးတွေ သွားလှူဖို့ စိတ်ဆုံးဖြစ်ထားတယ်....။ နောက်ဖြစ်တာက Thyrayn Kyaw Moe & Christinalim တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ခရီးသွားနဲ့ အိမ်မှာ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ RS Vlog တွေကြည့်ဖြစ်တယ်....။ ပြီးတော့ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်နွယ်တင်ရဲ့ ဆေးပညာဗဟုသုတတွေနဲ့ တရားဓမ္မတွေဖတ်ဖြစ်တယ်....။ ဟင်းချက်ပြီး Live လွှင့်တဲ့ ပေ့ချ်တွေကြည့်တယ်....။ မုန့်တွေသိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘဲ Movie တွေ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်...။
ပြီးတော့ ဝါတွင်းသုံးလ အဓိဌာန်ပတီးစိပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဝါထွက်တော့ ဘုရားပုံမှန်ရှိခိုးတာ ဂုဏ်တော်ပွားတာ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တာ ခင်ပွန်ကြီးဆယ်ပါးကန်တော့တာနဲ့ တရားထိုင်တာကို နေ့စဉ်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်....။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ပဌာန်းအကျယ်ပူဇော်တာလုပ်ဖြစ်တယ်....။ သုံးလသက်သတ်လွတ်စားဖြစ်တော့ ပေါင်ချိန် ဆယ်ပေါင်လောက်ကျသွားတော့ ဘုရားထိုင်ရှိခိုးတာ တရားထိုင်တာ အရင်လိုညောင်းညာတာ ကျင်တာမဖြစ်တော့ဘဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းပြီး နေလို့ကောင်းသွားတယ်...။ တရားထိုင်တာခုဆို ဝေဒနာကိုမှတ်ရတာ စက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာတော့တယ် ပြီးရင် ဘာမှမခံစားရတော့ဘူး အဲလို ခေါင်းစခြေဆုံးအားလုံးရှင်းသွားတော့မှဝင်လေထွက်လေကိုစမှတ်တယ်...။ ဘယ်အလုပ်မဆို မလုပ်ခင် warm up လုပ်ဖို့လိုတယ်....။ တရားမထိုင်ခင် အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကို လေသန့်တဲ့နေရာမှာ အရင်လုပ်သင့်တယ်....။ ပြီးတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ပယ်ပြီး ကောင်းတာကိုပဲရွေးယူဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်....။ ဒါတောင် စောစောအိပ်စောစောထတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်သေးဘူး...။ ညဖက်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်တာကို ဖြတ်မှရတော့မယ်....။ သေရင်ကိုယ့်နောက်ပါမှာက ကိုယ်ပြုထားတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲမဟုတ်လား....။ ဒါက သံသရာအတွက်ပါ.....။ သံသရာကလွတ်မြောက်ဖို့နည်းလမ်းကိုတော့ ခြေလှမ်းစတင်နေပါပြီ ခုကတည်းက ဘာဝနာတွေလုပ်ထားမှ နောင်အဆက်ဆက်ကျရင် ပါရမီပါနေမှာ....။ လုပ်ရမှာကတစ်ခုတည်း ဒါပေမယ့် လူတိုင်းအတွက် ခက်ခဲနေတယ် ဗုဒ္ဓဘုရားလမ်းညွှန်ပြသသွားတာ မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် စိတ်ကိုဖြူအောင်ထား အဓိကအကျဆုံးကဒါပါပဲ....။
ခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်အလုပ်တွေကို လုပ်ရတာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ....။ တခြားဘာမှသိပ်လုပ်စရာမရှိ အလုပ်သွားစရာမလိုတဲ့သူတွေအတွက် တကယ့်အချိန်ကောင်းပါ....။ စိတ်ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်နေတာတွေ အလကားနေရင်း သတင်းတွေကြည့်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများနေသူတွေအတွက် စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ယောဂတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်...။ အထူးသဖြင့် ဒီကပ်ကာလကြီးမှာ လင်မယားတွေ ကွဲနှုန်းမြှင့်တက်နေတယ်လို့လည်းကြားတယ်....။ ဘယ်မှလည်းသွားမရ ထွက်မရတော့ တစ်နေ့နေ့ မိုးလင်းလာလဲ ဒီမျက်နှာတွေ ဒီလူတွေကိုမြင်ပါများလာတော့ အရင်က သားသမီးတွေက ဒီချိန်ကျောင်းသွားနေတာ မျက်စေ့ရှေ့မရှိတော့ သိပ်မပြောရဘူး....ခုတော့ အချိန်ပြည့် မျောက်လောင်းလေးတွေလို့မြင်လာတယ်....။ ပြောမရဆိုမရလေးတွေဖြစ်လာတယ်...။ အိမ်သူသက်ထား လင်ယောကျာ်းတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေလည်း အသေးစိပ် ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပေါ်လာကြတယ်....။ အဲဒါပြောချင်တာ လူတွေဟာ တစ်ယောက်ကောင်းကွက်တစ်ယောက်ရှာမယ့်အစား အပြစ်တွေကိုပဲလိုက်မြင်လို့ ခုလိုအခြေနေတွေရောက်ကုန်ကြတာ....။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေတ္တာပွားများ ချစ်ခင်ကြပါ ဘဝကနေရမှာ အချိန်တိုတိုလေးကို ဘာလို့ အမုန်းပွားနေကြမလဲ....။ ဗြဟ္မဝိဟာရတရားကိုသာ လက်ကိုင်ထားကြပါ....။ မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာများများ ပွားနိုင်ကြပါ.... မလိုအပ်သည်များကို ဉပေက္ခာပြုလိုက်ပါ...။ လောကမှာ ဘယ်အရာကမှ သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး ...။ အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတာ ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ သဘောပေါက် မြင်သာလွယ်မှာပါ...။
ခုလောလောဆယ် မြင်တွေ့ကြားသိနေရတဲ့ အသက် ငါးဆယ်ငါးနောက်ပိုင်း ခြောက်ဆယ်ကျော်ဝင်းကျင် အမျိုးသမီး အမျိုးသားတွေဟာ သွေးဆုံးကိုင်ရောဂါကို ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ကြဘဲ စိတ်ရောဂါရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြတာတွေ အများကြီးပဲ....။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော အချုပ်ကတော့ ကံ စိတ် ဉတု အဟာရ ဒီလေးမျိုးကပြေးမလွတ်တာမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် နေထိုင်ပြုမူ စားသောက်နိုင်ကြပါစေ....။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ချစ်မှ တခြားလူကိုလဲ ချစ်လို့ရမှာမဟုတ်လား....။
Posted by Cameron at 01:48 No comments:
1930 နဲ့ 1950 ဝန်းကျင်က ဘဲကြီးတွေ......
နောက်ပိုင်း မြို့ထဲနဲ့ဝေးသွားတော့ စာအုပ်တွေကို ကျွန်မတို့နားက Shopping Mall မှာရှိတဲ့ အင်းဝကပဲဝယ်ဖတ်တာများတယ်...။ ပြီးတော့ Instagram မှာလဲ အင်းဝကို followed လုပ်ထားတော့ အသစ်ထွက်သမျှစာအုပ်တွေကို Update လေးသိနေရတယ်....။ The Guys Of Rangoon 1930 စာအုပ်ကိုတွေ့ကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ ၁၉၃၀ ခုနှစ်လောက် သူတွေအကြောင်းတစ်ခုခုရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပဲလို့အကြမ်းနားလည်ထားပေမယ့် တကယ်ဆိုင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အဲဒီစာအုပ်ကို ကိုင်ပြီးဖတ်ကြည့်တော့မှ အဲဒီဖက်ခေတ်တုန်းက အရမ်းကိုနာမည်ကြီးတဲ့ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်အကြောင်းကို အဓိက ဇာတ်တည်ပြီးရေးထားတာကို သိရတယ်...။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဆိုတာ ကြားဖူးနေပေမယ့် သာမန် လူဆိုးလူမိုက်တစ်ယောက်လမ်းသရဲတစ်ယောက်လို့ပဲ ထင်မှတ်ခဲ့တာ....။ စာရေးဆရာခက်ဇော်ရဲ့ စာအုပ်စာတမ်းများစွာကနေ ကိုးကားပြီး ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ရေးထားတာကြောင့် ဖတ်ရတာ စုံထောက်ဇာတ်လမ်းလေးဖတ်နေရသလို မျောပါသွားစေတယ်....။ စုံထောက်ဇာတ်လို့ပြောတာမှန်တော့မမှန်သေးဘူး... တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု အဲဒီခေတ်က လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်အပြင် သူ့ရဲ့ မိုက်ဖော်မိုက်ဖက် ဂန္ဓမာသောင်းရီနဲ့ ရုပ်ခပ်ချောချော နောက်ထပ်ဇာတ်လိုက်တစ်ယောက်ကတော့ ဗိုလ်တစ်ထောင်မောင်မိုးတို့အကြောင်းကို အကွက်ကျကျ ရေးသားထားတာက စာအုပ်ကိုအစကဖတ်တာနဲ့ လက်ကမချနိုင်အောင်ရေးသားနိုင်တာ တကယ်ချီးကျူးစရာပါ....။ ကျွန်မက အစပိုင်းက စာမျက်နှာတွေကိုလှန်ကြည့်တော့ အဲဒီလူမိုက်သုံးယောက်ရဲ့ Profile တွေကို ပုံနဲ့တကွပြထားတော့ ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ကွက်ကျကျနဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လို့မထင်ထားဘဲ ရိုးရိုးတမ်းတမ်း Documentary ပုံစံ မှတ်တမ်းသဘောမျိုးပဲရေးတယ်ထင်ခဲ့တာ......။ တော်ပြီနော် ဒီလောက်ပဲပြောပြတော့မယ် ကျွန်မ Spoil မလုပ်တော့ဘူး....။ ဖတ်ကြည့်ကြည့် တကယ်ကြီးအရမ်းကောင်းလို့ပြောတာ....။
The Guys of Rangoon 1930 စာအုပ်တစ်အုပ်တည်းရှိတယ်ထင်တာ The Guys From Mandalay 1950s လဲထွက်တယ်တဲ့ ညီမလေးယောက်ျား မတ်ကလေးက သူ့မှာရှိတယ်ပြောလို့ အဲစာအုပ်ကိုတော့ မဝယ်ဖြစ်တော့ဘဲ ငှားဖတ်လိုက်တယ်....။ တခါမှ အဲလိုစာအုပ်အထူကြီးတွေကို သုံးလေးရက်နဲ့ပြီးအောင်မဖတ်ဖူးခဲ့ဘူး ဒီ The Guys of Mandalay 1950s က ရန်ကုန်ကဇာတ်လမ်းထက်ပိုမိုက်တာ....။ အဲစာအုပ်ထဲက ဇာတ်ကောင် ဘုန်ကြီးလူထွက် ဓါးပြဗိုလ် စိန်ဓါးမြှောင်ဆိုတာကမှ တကယ်အမိုက်စားကြီး ဉာဏ်ပြေးလိုက်တာမှ ဓါးပြတိုက်ဖို့ ဗျူဟာတွေခင်းတာ ဆွဲတာဆိုတာ အဲခေတ်က ဖဆပလတို့ ဆိုရှယ်လစ်တို့ဆိုတဲ့ လူမိုက်တွေကို အပေးအယူနဲ့အသုံးချတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတေွတောင် လက်ဖျားခါတယ်....။ ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှ အဲခေတ်က နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ပြည်တွင်းရေးတွေကို စုံစုံစိစိ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်ရတော့တာပဲ....။ ဆင်ဆာမရှိ ဒိုင်ယာလော့တွေ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်နဲ့ ဖတ်ရတာ တကယ်အားရတယ်....။ Mandalay စာအုပ်မှာရန်ကုန်က လူမိုက်ဖိုးတုတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဂန္ဓမာသောင်းရီပါ ပါလာတော့ နှစ်အုပ်လုံးဖတ်မှ ပြည့်စုံမှာ ဇာတ်ရေလည်မှာ....။ စိန်ဓါးမြှောင်ခေတ်မှာ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်က ထောင်ထဲမှာ ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်မဆုံဖြစ်လိုက်ဘူး...။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်သာ စောစောစီးစီးမသေခဲ့ရင် သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတာနဲ့ ဘယ်သူမှတောင်နိုင်မယ်မထင်ဘူး....။ ရဲတွေ စစ်တပ်တွေလဲ တော်တော်အလုပ်များနေမှာ....။ ကဲ...ကဲ နှစ်အုပ်လုံးဖတ်ကြည့်နော်...။ နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေထဲက အရမ်းမနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဒီစာအုပ်တွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆို ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဝယ်ပို့ပေးမယ်....။ အဲလောက်ဖတ်စေချင်တာကြည့်.....။
Posted by Cameron at 07:582comments:
ကျယ်မနဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲညီမလေး တာလေဆေးရုံဝင်းထဲမှာ အဲတုန်းက ငါးနှစ်သမီး ကလေးမော်ဒယ် LoL!!!
တစ်နှစ်ကျော်အရွယ်တုန်းက အမွှာအဒေါ်တွေခေါ်သွားရာလိုက်ရတဲ့ မီးမီးလေ
အပါး(အဖေ)ရဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ ခုနှစ်နှစ်သမီး ဒီပုံက ကောင်းကလေးနဲ့ပိုတူတယ်
သူငယ်တန်းစတက်တော့ အဲအစ်မနဲ့ကျောင်းသွားတာ နွဲ့နွဲ့တဲ့
ကျွန်မတို့ အ လ က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးဆယ်မြူရယ်ရဲ့သမီး
၂၀၁၃ တုန်းက မောင်တဝမ်းကွဲ မင်္ဂလာဆောင်မှာ
Posted by Cameron at 20:46 No comments:
တန်ဆောင်မှုန်း ခေါ် တန်ဆောင်မုန်းသည်
မြန်မာပြက္ခဒိန်၏ ရှစ်လမြောက်လသည် အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျရောက်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ၃၀ ရက်ရှိသည်။ ရက်စုံသောလဖြစ်သည်။ 'တန်ဆောင်' မှာ 'မီးတိုင်' ဖြစ်ပြီး 'မှုန်း' မှာ 'ပျံနှံ့စေခြင်း' အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ထိုဝေါဟာရနှစ်ခု ပေါင်းလိုက်လျှင် 'မျက်စိတဆုံး ဆီမီးတိုင်များ ပွားများ ထွန်းလင်းနေသည်' ဟုဆိုလိုသောကြောင့် မီးထွန်းပွဲကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ တောင်သူအများ ကောက်လျင် (ခေါ်) ကောက်ငယ်ရိတ်သိမ်းချိန် ကျရောက်သည့်ကာလလည်း ဖြစ်ပေသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလအတွက် အထိမ်းအမှတ်ပန်းမှာ ခဝဲပန်း (Dysolobium grande) ဖြစ်သည်။
တန်ဆောင်မုန်းလသည် မီးရှုး၊ မီးတိုင်၊ ဆီမီးတို့ကို ထွန်းလင်းတောက်ပစေသောလဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့သည် တန်ဆောင်မုန်းလ၌ "ကထိန်ပွဲတော်" ကို အစဉ်အလာမပြတ် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ "ကထိန်" သည် "ကထိန" ဟူသော ပါဠိကို မြန်မာမှုပြုကာ မြန်မာဝေါဟာရသို့ ပြောင်းလဲထားသော အမည်ဖြစ်၏။ ကထိန် ဟူသည် သင်္ကန်းဖြတ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ ဆိုးခြင်း၊ လှူခြင်း၊ ခင်းခြင်း စသော ကထိန်အမှုနှင့် စပ်သမျှ အရာအားလုံးကို ခြုံငုံ၍ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသော အမည်ဝေါဟာရပင်ဖြစ်သည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် ပါဝေယျတိုင်းသား၊ ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီရဟန်းသုံးကျိပ်တို့ကို အကြောင်းပြု၍ "ရဟန်းတော်များ အဓိဋ္ဌာန်တင် သင်္ကန်းသုံးထည်တို့တွင် တစ်ထည်ထည်ကို ထား၍ မပင်မပန်း ပေါ့ပါးရွှင်လန်းစွာ သွားနိုင်ကြပါစေ၊ သင်္ကန်းရှားပါး နွမ်းပါးခြင်းမှ ကင်းကြပါစေ" ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရှေးရှေးသော ဘုရားရှင်တို့၏ အစဉ်အလာအတိုင်း ကထိန်သင်္ကန်းအလှူသည် ထူးခြားသော ဝိနည်းကံနှင့်အညီ လှူရသောကြောင့် ထူးခြားသော အလှူဖြစ်၏။ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ ခွင့်ပြုသော ကာလမှာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့မှ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ တစ်လတာ ကာလဖြစ်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ကထိန်ခင်းရာတွင် နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီး၊ အပေါ်ရုံ ဧကသီ၊ ခါးဝတ်သင်းပိုင်ဟူသော သုံးထည်သော သင်္ကန်းတို့တွင် တစ်ထည်တည်းသော သင်္ကန်းဖြင့်သာ ကထိန်ခင်းခွင့်ပြုသည်။ ထိုသုံးထည်သော သင်္ကန်းတို့တွင်လည်း အလှူရှင်က မိမိအလိုအလျောက် သဒ္ဓါပေါက်၍ လှူဒါန်းသော သင်္ကန်းသည်သာ ကထိန်ခင်းထိုက်သော သင်္ကန်းဖြစ်၏။ ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းရာ၌လည်း ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဂိုဏ်းဂဏတို့ကို ရည်မှန်း၍ လှူဒါန်းခြင်းမပြုရပေ။ သံဃာ့ဂုဏ်ကိုသာ အာရုံပြု၍ လှူဒါန်းရသည်။ သံဃာ့ဂုဏ်ကိုသာ အာရုံပြု၍ လှူဒါန်းရသည်။ သံဃာ့ဂုဏ်ကို လှူဒါန်းမှသာလျှင် ကထိန်အလှူမြောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကထိန်အလှူရှင်သည် မိမိပိုင်သင်္ကန်းတစ်ထည်ထည်ကို သံဃာရှေ့မှောက်သို့ အရောက်ဆောင်၍ "ဤကထိန်လျာသင်္ကန်းကို သံဃာအား လှူဒါန်းပါ၏။" ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ "ဤကထိန်လျာသင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းတော်မူကြပါ" ဟူ၍ လည်းကောင်း နှုတ်မြွက်၍ လှူဒါန်းရမည်ဖြစ်သည်။
ကထိန်ခင်းခြင်းကြောင့် ရဟန်းတော်များ ရအပ်သည့်အကျိုးတရားများမှာ -
ဒါယကာတစ်ဦးဦးက မအပ်သော အသုံးအနှုန်းဖြင့် ဆွမ်းစားပင့်သော်လည်း အနီးရှိရဟန်းများကို မပန်ကြားဘဲ ရွာတွင်းသို့ သွားနိုင်ခြင်း။
တိစီဝရိတ် အဓိဋ္ဌာန်တင်ထားသော သင်္ကန်းကို မယူဆောင်ဘဲ သွားလိုရာသို့ သွားနိုင်ခြင်း။
ရလာသမျှသော သင်္ကန်းတို့ကို အဓိဋ္ဌာန်ဝိကပ္ပနာ မပြုဘဲ ဝတ်ရုံဆင်မြန်းနိုင်ခြင်း။
မအပ်သော ပင့်နည်းဖြင့် ဆွမ်းစားပင့်သော်လည်း လေးပါး၊ လေးပါးထက်ပိုသော ရဟန်းတို့ စုပေါင်း ခံယူဘုဉ်းပေးနိုင်ခြင်း။
ကထိန်ခင်းရာ ကျောင်းတိုက်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော သင်္ကန်းများကို ကထိန်ခင်းသော ရဟန်းတို့က သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။
ဟူသော အကျိုးတရားငါးပါးတို့ကို ရရှိခံစားနိုင်ပါသည်။
ဝါတွင်းကာလ၌ ဝါမကျိုးမပြတ်အောင် စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းနေထိုင်ကြသည့် သံဃာတော်များအား ချီးမြှောက်ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ထိုအာနိသင် (အကျိုးသက်ရောက်မှု) ငါးမျိုးကို တပေါင်းလပြည့်တိုင်အောင် ငါးလကျယ်ပြန့်စွာရရှိစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းကို ကထိန်ခင်းခြင်းဟု ခေါ်ပေသည်။ ကထိန်အာနိသင် ငါးမျိုးသည် ကထိန်သင်္ကန်းတည်းဟူသော ဝတ္ထုပစ္စည်းကြောင့် ရဟန်းတော်များ လိုက်နာကျင့်သုံးရသည့် သိက္ခာပုဒ်အချို့ ခေတ္တခဏ ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်ရသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုပင် ဘုရားရှင်တို့ ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ အာဏာစက်ဖြစ်သည့် ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တို့ကို ခေတ္တခဏ ပယ်နုတ်နိုင်သည်မှာ ကထိန်အလှူတစ်ခုတည်းသာရှိပေသည်။
ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များမှာလည်း အကျိုးတရားများကို ရရှိခံစားကြရမည်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအကျိုးတရားများကား-
သွားလေရာရာ အရပ်တို့၌ အနှောင့်အယှက်မရှိ၊ ဘေးကင်းစွာ သွားရခြင်း။
မိမိပိုင်ပစ္စည်းများကို ရန်သူတို့ မဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း။
စားကောင်းသောက်ဖွယ် အထူးပေါများ၍ အစားအတွက် ဘေးမဖြစ်နိုင်၊ အဆိပ်မသင့်နိုင်ခြင်း။
မိမိပိုင်ပစ္စည်များကို ကာလကြာမြင့်စွာ မေ့လျော့နေသော်လည်း မဆုံးပါးနိုင်ခြင်း။
ပစ္စည်းများရှာဖွေရာတွင် သူတကာတို့ထက်ထူး၍ အစုလိုက် အပုံလိုက် ရခြင်း။
ဟူသော အကျိုးတရားများကို ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။
"မသိုးသင်္ကန်း" ဟူသည် သံဃာတော်များကိုယ်တိုင် သင်္ကန်းများကို ချုပ်ဆိုးဝတ်ကြရသည့်ခေတ်က ကထိန်သင်္ကန်း၏ နာမည်ထူးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်က ရဟန်းသံဃာတော်များသည် ကထိန်ခင်းရန်အတွက် လှူဒါန်းသောအဝတ်ကို ညသိပ် သိမ်းဆည်းမထားဘဲ လှူဒါန်းသည့်နေ့ အရုဏ်မတက်မီအချိန်အတွင်း သင်္ကန်းပေးအပ်မှု၊ ချုပ်ဆိုးမှုကိစ္စများ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ကိစ္စအားလုံးကို နေ့ချင်းပြီးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော သင်္ကန်းမျိုးကို "မသိုးသင်္ကန်း" ဟုခေါ်သည်။ သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးနေစဉ် အရုဏ်တက်ခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ၊ သင်္ကန်းပေးအပ်မှု၊ ချုပ်ဆိုးမှုတို့ကို လုံးဝမပြုဘဲ ညအိပ်ထားလျှင်ဖြစ်စေ သင်္ကန်းသိုးသည်ဟုဆိုသည်။ အချိန်မီအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် သင်္ကန်းသိုးသွားသည်အခါ ထိုသင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်း၍ မရတော့ပေ။
ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ကား အလှူရှင် ဒါယကာ ဒါယိကာမများက ချုပ်ဆိုးပြီး သင်္ကန်းများကို ကထိန်သင်္ကန်းအဖြစ် လှူဒါန်းကြသဖြင့် ချုပ်ခြင်း၊ ဆိုးခြင်းကိစ္စများကို သံဃာတော်များကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန် မလိုတော့ပေ။ အသင့်ချုပ်ဆိုးပြီး လှူဒါန်းသော သင်္ကန်းဖြင့် ကထိန်ခင်းကြရန်သာရှိပေတော့သည်။ မသိုးသင်္ကန်းရက်လှူပွဲသည် ကထိန်ပွဲတော်မှ ဖြာထွက်လာသော ပွဲငယ်တစ်ခုဖြစ်၏။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ညတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒါယကာ ဒါယိကာမများက မသိုးသင်္ကန်းရက်၍ မြတ်စွာဘုရားအား လှူဒါန်းပူဇော်ကြရာမှ "မသိုးသင်္ကန်းရက်လှူပွဲ" ဟူသော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
"ပဲသုကူပစ်ပွဲ" သည်လည်း တန်ဆောင်းမုန်းလ၏ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်သည်။ ပံသုကူပစ်ပွဲသည် အခြားပွဲများကဲ့သို့ လူစုလူဝေးဖြင့် ထင်ထင်ရှားရှား ကျင်းပသော ပွဲမျိုးမဟုတ်၊ လူအများကွယ်ရာမှာတွင်ဖြစ်စေ၊ ညမှောင်ချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ သင်္ကန်းစသည့် သံဃာ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို တိတ်တဆိတ် စွန့်ပစ်လှူဒါန်းကြသောပွဲမျိုးဖြစ်သည်။ ပံသုကူပစ်ပွဲသည် ရဟန်းသံဃာတော်များ ကျင့်စဉ်ဓမ္မများဖြစ်သော ဓုတင် ၁၃ ပါးတွင် တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သည့် ပံသုကူဓုတင်ကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောပွဲဖြစ်၏။ "ပံသုကူဓုတင်" အကျင့်ဟူသည်မှာ ဒါယကာ ဒါယကာမများက တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းသည့် သင်္ကန်းကိုပယ်၍ လူတို့စွန့်ပစ်ထားသော အဝတ်များကို ကောက်ယူစုဆောင်ပြီး၊ ချုပ်၊ စပ်၊ ဆိုးထားသော သင်္ကန်းကိုသာ ဝတ်ရုံခြင်းဖြစ်သည်။
ဤတန်ဆောင်မုန်းလသည်ကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရာပွဲတော် အများဆုံးသော ကာလဖြစ်၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟူသည် လူ၊ နတ်၊ နိဗ္ဗာန် သုံးတန်သော ချမ်းသာကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဤတန်ဆောင်ကာလသမယ၌ မိမိတို့ စွမ်းအားအလျောက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကို ဖြည့်ကျင့်ပြုလုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်တင်ပြရပါသည်။
ကိုးကား ။ ။ ဝီကီပီးဒီးယား
Posted by Cameron at 02:03 No comments:
တကယ်ဆို ဝါတွင်းကာလထဲမှာကတည်းက သက်သတ်လွတ်စားတဲ့သူတွေကိုမျှဝေဖို့ ဒီပို့စ်တွေကို အဲတုန်းကတည်းကတင်ခဲ့ရမှာကို သိပေမယ့် မိုးငွေ့လို ဘုရားစူးဘလော့ဂါတစ်ယောက်မှာ Laptop တစ်ခုတောင်မရှိလို့ stay home ကာလမှာ အိမ်မှာ ပို့စ်တွေကို တင်ချင်တိုင်းမတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး....။ ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲကိုယ်ပြန်ရောက်မှ ရေးချင်တာလေးတွေ ရေးထားပြီး Draft ထဲသိမ်းထားပြီးမှ တင်ရတာပါ...။
ဒါကြောင့်မို့ ဝါတွင်းသုံးလမှာ သက်သတ်လွတ်စားခဲ့တုန်းက ကျွန်မစားခဲ့တဲ့ ရှမ်းငရုတ်သီးထောင်းနည်းလေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်....။ လွယ်လွယ်လေးတွေပါ တကယ်....။ ဒီငရုတ်သီးထောင်းနည်းမျိုးစုံကို ပိုသိသွားစေတာက ကျွန်မရဲ့ အမွှာအဒေါ်အငယ်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပါ ...။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမတိုင်မီကတည်းက ဆေးကုဖို့တာချီလိတ်ကနေ အဒေါ်အငယ်ရောက်လာကတည်းက ကျွန်မသက်သတ်လွတ်စားတာနဲ့ကြုံတာနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ် အဒေါ်က ရှမ်းငရုတ်သီးထောင်းနည်းမျိုးစုံမှာ တကယ့်ဆရာ...သူ့ဆီကပဲသင်ယူခဲ့တာ...။ ရှမ်းငရုတ်သီးထောင်းမှာ အခြေခံကတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူပါပဲ.....။ အဲနှစ်မျိုးထဲကို မီးသွေးဖိုသုံးရင် မီးကင်ပေး မသုံးရင်တော့ ဒယ်အိုးလေးနဲ့လှော်ပြီးထောင်း တအားညက်စရာမလိုဘူး ဆား အချိုမှုန့်လေးထည့် နံနံပင်လေးရိတ်ရိတ်လှီးထည့် အဲဒီငရုတ်သီးထောင်းလေးကို ထမင်းပူပူ မဟုတ်ရင် ကောက်ညှင်းပေါင်းလေးနဲ့စား တခြားဘာဟင်းမှမရှိလဲဖြစ်တယ်....။ အဲဒီငရုတ်သီးထောင်းကို နံနံငရုတ်သီးထောင်း (သို့) နမ့်ဖစ်နွန်လို့ခေါ်တယ်ရှမ်းလို....။ နမ့်ဖစ်ဆိုတာ ငရုတ်သီးထောင်း နွန်ဆိုတာက နုတာလို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်...။ ငရုတ်သီးနုထောင်းပေါ့....။
ရှမ်းခရမ်းချဉ်သီးငရုတ်သီးထောင်း (သို့) ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်
ခရမ်းချဉ်သီးငရုတ်သီးထောင်းကျတော့ မြန်မာလို ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်နဲ့တော်တော်ဆင်တူပါတယ် အရသာက....။
ငရုတ်သီး အစိမ်း(သို့)အနီ ၁၀ တောင့် (မိမိနှစ်သက်သလိုထည့်နိုင်ပါတယ်)
ကြက်သွန်နီဉကြီး တစ်လုံး (မထည့်လည်းရ)
ကြက်သွန်ဖြူ နီ ငရုတ်သီးကို မီးကင်(သို့)လှော်ပေးထားပါ....။ ခရမ်းချဉ်သီးတွေလည်း တောမှာဆို သီတံနဲ့သီပြီး မီးကင်ပါတယ်...။ ကြက်သွန်ဉတွေဆိုလည်း ထင်းမီးဖိုပြာပူထဲနစ်ပြီးဖုတ်ရင် ပိုမွှေးပြီး အိနေရော....။ ခရမ်းချဉ်သီးကို အလုံးမပျက် ဓါးနဲ့လေးစိပ်အရာပေးပြီး အခွံကျွတ်သွားတဲ့အထိ ပြုတ်ပေးပါ....။ ငရုတ်သီးနဲ့ကြက်သွန်တွေကိုအရင်ထောင်းပါ....။ ရရင် ထောင်းထားတဲ့ပဲပုပ်မှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ နှစ်‌ဇွန်းလောက်ထည့်ထောင်းပြီးရင် အခွံခွာထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပြုတ်ကိုထည့်ပြီး ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ကျေသွားအောင် အသာလေးဖိဖိပေးပါ....။ အားလုံးကျေသွားရင် နံနံပင်လေးထည့် အရသာထည့်ပြီးရင် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ....။ အတို့အမြှုပ်အနေနဲ့ သူကျတော့ အရွက်ပြုတ်တွေနဲ့ပိုလိုက်ဖက်တယ်....။ ပန်းမုန်လာအဖြူ အစိမ်း ဂေါ်ဖီ ဘိုစားပဲ ပဲတောင့်ရှည် မုန်ညင်းဖူး စတာတွေကို ဆီတစ်စက်နှစ်စက်ထည့်ထားတဲ့ ရေနွေးပွက်ပွက်မှာ ခနဖျောပြီး ရေခဲရေစိမ်ထားပြီး ရေပြန်စစ် (အရွက်တွေစိမ်းနေအောင်လို့)...။ ဂေါ်ရခါးသီးပြုတ်နဲ့လဲလိုက်ဖက်တယ်....။ သက်သတ်လွတ်မစားရင်တော့ ဝက်သရေကြော်(ဝက်ခေါက်ကြော်)နဲ့စားရင်လည်းကောင်းတယ်....။
ငရုတ်သီးစိမ်း ၁၀ တောင့် (မိမိနှစ်သက်ရာငရုတ်သီး)
ကြက်သွန်ဖြူအမွှာကြီး ၅ မွှာ
ငရုတ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို မွှေးနေအောင် ကင်(သို့)လှော်ပြီး ထောင်းပါ (တအားမညက်လဲရ) အရသာဆားနဲ့အချိုမှုန့်ထည့်ပြီး လှီးထားတဲ့ နံနံပင်ပါထည့်ထောင်းပါ...။ နံနံပင်ထည့်ထောင်းလိုက်မှာ အနံ့လေးပိုမွှေးလာမှာပါ...။ ထောင်းပြီးရင် ငရုတ်ဆုံမှာကပ်နေတာတွေကို စားတတ်ရင် ထမင်းထည့်ထောင်းပြီး စားလို့ရပါတယ်...။ ဒီငရုတ်သီးထောင်းက တို့စရာအသီးအရွက်တွေနဲ့စားစရာသိပ်မလိုဘူး စားချင်ရင်လဲရတယ် ထမင်းနဲံဒီတိုင်းစားတာပိုကောင်းတယ်...။ ပုံရိုက်ထားတာမရှိလို့မပြရ...။
ငရုတ်သီး ၁၀ တောင့် (မိမိနှစ်သက်ရာငရုတ်သီး အရေအတွက်နှစ်သက်သလောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်)
မျှစ်ထောင်းမှာကျတော့ အရောင်လှအောင် ငရုတ်သီးအနီတောင့်ကို သုံးပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်...။ ငရုတ်သီးအနီတွေက ပိုလဲစပ်ပါတယ် အစပ်မစားနိုင်ရင်လျှော့ထည့်ပေးပါ...။ မျှစ်က ဈေးထဲက ပြုတ်ပြီးသားဝယ်ခဲ့လဲ အိမ်ရောက်ရင် တရေပြန်ပြုတ်ပေးပါ...။ ငရုတ်သီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းပြီးရင် မျှစ်ကို ပါးပါးလှီးထည့်ထောင်း အရသာအတွက်ထည့်ပြီး နှစ်သက်ရင် ပဲဆီစစ်စစ်လေးဆမ်းပြီး စားသုံးပါ....။ ထမင်းပူပူနဲ့ သူကျတော့ သခွားသီးနဲ့ ပူစီနံတို့နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်...။
ဒီထောင်းနည်းကလဲ ဘာမှမခက် အခြေခံငရုတ်သီးထောင်း (နမ့်ဖစ်နွန်)ထဲကို ပဲပုပ်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ....။
ထုံးစံအတိုင်း ငရုတ်သီးကြက်သွန် မီးကင်ထားတာကိုထောင်းပြီးရင် ပဲပုပ်မှုန့်နှစ်ဇွန်းထည့် အရသာထည့် နံနံပင်ထည့်ထောင်းပြီးရင်ရပြီ....။ လွက်ချက်....။ ဒီငရုတ်သီးထောင်းက ရှမ်းအိမ်တွေမှာ မနက်တိုင်းကောက်ညှင်းပေါင်းပြီးတာနဲ့ ကောက်ညှင်းကိုလက်ပေါ်မှာ အဝိုင်းပြားလေးလုပ်ပြီး ငရုတ်သီးလေးတစ်ကော်ကော်ထည့်ပြီး ဒီတိုင်းစားကြတာ မနက်စာကို....။ စပ်စပ်မွှေးမွှေးနဲ့ သိပ်ကောင်းပဲ....။ မုန်ညင်းပြုတ်နည်းလေးပါတစ်ခါတည်းပြောပြမယ်နော်....။ အိုးတစ်လုံးထဲ ရေလိုသလောက်ထည့် ရေဆူလာရင် ကြက်သွန်ဖြူမွှာကြီး သုံးမွှာနဲ့ ကြက်သွန်နီတစ်ဉထောင်းထားတာကို ထည့်ပြုတ် အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးစိမ်းပါထည့်ထောင်းပါ...။ ပြီးတော့ မုန်ညင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျင်းတပြားလောက်ထည့်ပြုတ်ပေးပါ...။ မုန်ညင်းစားရင် အဆာမကြေဖြစ်စေလို့ ဂျင်းထည့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်....။ ကြက်သွန်တွေကျက်ပြီးအစိမ်းနံ့ပျောက်တော့မှ ဆား အချိုမှုန့်ခပ်ပြီး ရေဆေးထားတဲ့ မုန်ညင်းရွက်တွေကိုထည့်လိုက်ပါ ယောင်းမနဲ့ချက်ချင်မမွှေရသေးပါဘူး ခနစောင့်ပြီးမှ ရေပွက်ပွက်ပြန်ဆူလာမှာ အရွက်တွေကို တဖက်လှန်ပေး နွမ်းသွားတဲ့အထိမပြုတ်ပါဘူး အရွက်နူးပြီဆို မီးပိတ်ပြီး ဖိုပေါ်ကအိုးကိုချလိုက်ပါ....။ အဖုံးမဖုံးထားပါနဲ့ ဖုံးထားရင် အရွက်တွေဝါသွားတတ်လို့ပါ....။ ဒီဟင်းရည်ကို သောက်ခါနီးမှအရွက်ခပ်တာပိုကောင်းပါတယ်....။ ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်တွေကျက်ရင် အိုးကိုခနထားပြီး ထမင်းစားခါနီးမှ ပြန်ဆူပြီး အရွက်ခပ်ပါ...။
ရှမ်းပဲပုပ်ငရုတ်သီးထောင်း ဗယာကြော်နဲ့ ဂွေးတောက်ချိုရွက် ဟင်းခါး
ဒီပုံထဲက ဂွေးတောက်ချိုရွက် ဟင်းချိုဆိုလည်း အပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့ မုန်ညင်းဟင်းချို ချက်နည်းအတိုင်းပါပဲ...။ မုန်ညင်းရွက်မဟုတ်တဲ့အတွက် ချွင်းချက်က ဂျင်းထည့်စရာမလိုပါဘူး....။ ကြက်သွန်ဖြူနီ ငရုတ်သီးနဲ့ဆိုရပါပြီ...။ ကြက်ရိုးနဲ့ဟင်းခါးချက်တဲ့ ဂွေးတောက်ရွက်က အရွက်ကြီးကြီးနဲ့ပိုခါးတယ်...။ အခုကျွန်မဟင်းချိုချက်တဲ့ ဂွေးတောက်ရွက်က အနုလေးတွေ အညွန့်လေးတွေ သိပ်မခါးဘဲ နဲနဲပဲသက်တယ်....။ ဆူးပုပ် လေးငါးခက်လောက်ရောခပ်ရင် ပိုလို့ကောင်းပဲ....။ ဘာအသားငါးမှမပါဘဲ ချိုနေရော စမ်းလုပ်ကြည့်ကြပါနော်...။ သက်သတ်လွတ်မဟုတ်ရင်တော့ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်လေးခပ်လည်းကောင်းမယ်ထင်တယ်...။ သက်သတ်လွတ်မှာတော့ ကျွန်မက ပဲပုပ်မှုန့်လေးနဲနဲခပ်ပေးတယ်...။ ငရုတ်သီးထောင်းစပ်စပ်နဲ့ ဟင်းချိုပူပူနဲ့ အေးတဲ့ရာသီဆို ပိုစားမြိန်တယ်....။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ရှမ်းပြည်မှာ ဂွေးသီးငရုတ်သီးထောင်းဆိုတာ စားဖူးခဲ့တယ်....။ ဒီကလိုဂွေးသီးမဟုတ်ဘူး အလုံးကြီးပြီး ငရုတ်သီးထောင်းလုပ်ဖို့ ပြုတ်ပေးရတယ်....။ ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်လိုပဲ အရည်မပျစ်မကျဲနဲ့ အထဲမှာ ဂွေးသီးငရုတ်သီးထောင်းမှန်းသိသာအောင်လို့လားမသိ ဂွေးသီးအစေ့လေးပါထည့်ထားတတ်ကြတယ်...။ သူ့လဲ အရွက်ပြုတ်နဲ့တို့စားတတ်ကြတယ်...။
ဗူးညွန့်နဲ့ရွှေဖရုံသီးဟင်းချို ကြွက်နားရွက်မှို ပဲကြာဇံသုပ် အာလူးကြက်ဉပျော့ကြော်
ဗူးညွန့်နဲ့ရွှေဖရုံသီးဟင်းချိုလဲ အပေါ်က နည်းအတိုင်းပဲနော် လွယ်တယ်....။ ကြွက်နားရွက်မှိုကတော့ သွေးခဲသွေးပစ်တဲ့သူတွေအတွက် သွေးတိုးသမားတွေအတွက်သိပ်ကောင်းပါတယ်....သွေးကျဲစေတယ်...။ ကြွက်နားရွက်မှိုနဲ့ပဲကြာဇံကို ရေဆူဆူမှာ ခနပြုတ်ပြီး မြေပဲဆံလှော် ကြက်သွန်နီအစိမ်း ကြက်သွန်နီဆီချက်တို့နဲ့ သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး သုပ်ထားတာပါ....။ အာလူးကတော့ အချောင်းလေးတွေလှီးပြီး ကြက်သွန်ဖြူနုတ်နုတ်စင်းထားတာကို ဆီသတ် မွှေးလာရင် အာလူးထည့်ကြော် ပဲငံပြာရည်အကြည်ထည့် ငရုတ်ကောင်းနဲနဲထည့် ရေနွေးလေးထည့်ပြီး အာလူးနူးလာတဲ့အထိနှပ်ပေး အာလူးရရင် ကြက်ဉတစ်လုံးဖောက်ထည့်မွှေး ကြက်ဉလေးလှိမ့်ပြီဆိုရပြီ ထမင်းနဲ့နယ်စားဖို့ ဆီနဲနဲပိုထည့်ကြော်ပေးပါ...။ နောက်တစ်မျိုးပြောဖို့ကျန် မြေပဲဆံလှော်ငရုတ်သီးထောင်းလည်း သိပ်စားကောင်းတယ် ....။ နမ့်ဖစ်နွန်အတိုင်းကိုပဲထောင်းပြီး အဆီထွက်တဲ့အထိညက်နေအောင်ထောင်းထားတဲ့‌မြေပဲဆံကိုရောထောင်းပြီး သူကျတော့ မကျည်းမှည့်ဖျော်ရည်လေးတစ်ဇွန်းလောက်ထည့်ဖျော်ရတယ်....။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ သိပ်ကောင်းပဲ....။ အသီးရွက်ပြုတ်တွေနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်...။
ကိုဗစ်ကာလမှာ အိမ်မှာပဲနေနေရလို့ တစ်ချို့ ဟင်းမချက်တတ်တဲ့သူတွေလည်း စားဖိုမှုးဖြစ် မသိမတတ်သေးတဲ့အရာတွေအကုန်သိရ တတ်ရတော့ အဆိုးထဲက အကောင်းအမြတ်ထွက်အောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော်....။
Posted by Cameron at 20:58 No comments:
နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တ
အဘိဓမ္မာစိတ်ပိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ပါရမီဖြည့်ကျင့် ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လူတွေကိုလည်း ပြန်လည်ဟောကြားသင်ပြခဲ့တဲ့ ပိဋိကတ်သုံးပုံကနေပဲစရမယ်ထင်တယ်....။ Family Tree ပုံစံလေးဆွဲပြချင်ပေမယ့် လောလောဆယ် အဆင်ပြေနားလည်လွယ်မယ့်ပုံစံနဲ့ပဲရေးပြပါမယ်....။ ပိဋိကတ်သုံးပုံထဲကမှ အဘိဓမ္မာမှာ အပိုင်းလေးပိုင်းပြန်ခွဲထားပါတယ်...။ အဲဒီလေးပိုင်းထဲက ပထမဆုံး စိတ်အကြောင်းလေးကို (ဆရာဒေါက်တာစိန်လင်းရေးသားတဲ့ ရွှေစင်မြင်းမိုရ်အဘိဓမ္မာစာအုပ်ထဲက) ကျွန်မလေ့လာမှတ်သားသလောက်လေး ပြောပြချင်ပါတယ်...။ တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းခဲ့တာတွေ့ရင် ကျွန်မရဲ့အမှားသာဖြစ်လို့ ကော်မန့်မှာလာပြောပြပေးလို့ရပါတယ်...။
ပိဋိကတ်သုံးပုံ = သုတ္တန်, ဝိနည်း, အဘိဓမ္မာ
အဘိဓမ္မာ = စိတ်, စေတသိတ်, ရုပ်, နိဗ္ဗာန်
စိတ် (၈၉) = လောကီစိတ် (၈၁) + လောကုတ္တရာစိတ်(၈)
အာရုံကိုသိတဲ့ သဘောကို စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်...။ စိတ်ဆိုတာ အာရုံရှိမှဖြစ်တာ...။ အာရုံမရှိရင် စိတ်မရှိနိုင်ပါဘူး..။ စိတ် ၈၉ ထဲက လောကီစိတ် (၈၁)ပါးကို အသေးစိပ်ထပ်ရေးပြပါမယ်...။
ကာမဝိစရစိတ် = ၅၄ ပါး
ရူပါဝိစရစိတ် = ၁၅ ပါး
အရူပါဝိစရစိတ်= ၁၂ ပါး
စုစုပေါင်း ၈၁ ပါး
အကုသိုလ်စိတ် = ၁၂ ပါး
အဟိတ်စိတ် = ၁၈ ပါး
ကာမသောမနစိတ် = ၂၄ ပါး
စုစုပေါင်း ၅၄ ပါး
လောဘမူစိတ် = ၈ ပါး
ဒေါသမူစိတ် = ၂ ပါး
မောဟမူစိတ် = ၂ ပါး
စုစုပေါင်း ၁၂ ပါး
အကုသိုလ်စိတ်ဟာ လူတိုင်းနားရည်ဝပြီးသားဖြစ်တဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ ပါ...။ လောဘအရင်းခံ ၈ ခု၊ ဒေါသအရင်းခံ ၂ ခု၊ မောဟအရင်းခံ ၂ ခုဆိုတော့ စုစုပေါင်း (၁၂)ပါးရှိပါတယ်...။ ပထမဆုံး လောဘမူစိတ်က စပါမယ်...။ လောဘဆိုတာ လိုချင်တပ်မက်မှု...။
စိတ်ဆိုတာ မကောင်းမှုမှာပဲ ပျော်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း ထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းစားချင်တာ၊ သာယာတဲ့သီချင်းနားထောင်ချင်တာ၊ တီဗီဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးကြည့်ချင်တာ၊ အဝတ်အစားလှလှလေးဝတ်ချင်တာ၊ မိတ်ကပ်နံ့သာချယ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို မိမိအလှဆင်နေတာတွေအားလုံးဟာ သူများအသက်သတ်တာ ပစ္စည်းခိုးတာ မုသားစကားပြောတာ တို့လို အပြစ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဒီအတွေးတွေနဲ့ တပ်မက်လိုချင်တာအားလုံးက လောဘစိတ်တွေပါပဲ...။
၁) သောမနဿ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ သမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းမရှိဘဲ မှားသောအယူဖြင့်အတူယှဉ်တွဲ၍ဖြစ်သော သာယာနှစ်သစ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်။
လောကကြီးဟာ မြဲတယ် သတ္တဝါတွေဟာ သေပြီးရင် ဘဝပြတ်သွားတယ်..။ ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အယူအားလုံးဟာ မှားတဲ့အယူတွေပါပဲ...။ ဒါကတော စာအတိုင်းရှင်းပြတာ...။ လက်တွေ့မှာတော့ လိုချင်တပ်မက်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ စိတ်ကူးကြတယ်...။ စားသောက်ကြတယ်...။ သီချင်းနားထောင်ကြတယ်...။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်...။ ဒါတွေကို လောဘစိတ်လို့မမြင်ကြဘူး...။ အကုသိုလ်လောဘစိတ်တွေနဲ့မမြင်လို့ အယူလွဲနေတာလို့ ပြောရတာပါ...။ ဒီလိုအမြဲလိုလိုယှဉ်နေတော့ လောဘမူစိတ်ဟာ များသောအားဖြင့် ဒိဌိဂတ သမ္ပယုတ်စိတ်တွေဖြစ်တာများတယ်...။
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ နေ့ခင်း(၁၂)နာရီမှာ ထမင်းစားကြမယ်...။ ကျောင်းသားတွေဆိုလည်း မနက် (၈)နာရီထိုးတာနဲ့ ကျောင်းသွားကြတယ်....။ အလုပ်မသွားခင် အလှပြင်ကြတယ်...။ တခါ ညပိုင်း ပဌာန်းပုံမှန်ရွတ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းဘဲလုပ်နေတာ အသင်္ခါရစိတ်လို့ခေါ်တယ်...။
ဉပမာ မနက်အလုပ်မသွားခင် မှန်ရှေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာသီချင်းဆိုပြီး သနပ်ခါးမိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အလှပြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်....။ သနပ်ခါးလိမ်းပြီးအလှပြင်နေတာလို့မမြင်လို့ ဒိဌိဂတသမ္ပယုတ် ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းဘဲ အလိုအလျောက်လုပ်တာမျိုးဖြစ်တော့ အသင်္ခါရိက ဒါကြောင့် သောမနဿ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်....။ One consciousness, unprompted accomplained with pleasure and connected with wrong view.
ဒီစိတ်ဟာ လောဘနဲ့တွဲမှဖြစ်တာဆိုတော့ သူများကို ရိုက်နှက်တဲ့အခါမဖြစ်ပါဘူး...။ သူများကို စိတ်ထိခိုက်အောင်ဆိုရင် ဒေါသနဲ့လုပ်တာ တခါတွေဝေပြီးဒွိဟစိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်း မောဟနဲ့ယှဉ်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး...။ ကိုယ့်ပစ္စည်းမက်မောနေတာ သူများဆီက ပစ္စည်းကို လိုချင်တဲ့အခါ ထမင်းဟင်းကိုအရသာခံပြီးစားနေတာ နောက် ကာမဂုဏ်အာရုံတွေကို နှစ်သက်စွဲလန်းတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တာပါ...။ အဘိဓမ္မာထဲမှာ စိတ်တွေဟာ စာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိနေပါလားလို့ ဖြည်းဖြည်းနားလည်သွားရင် အကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေလည်း နည်းသွားလိမ့်မယ်...။
၂) သောမနဿ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ သမ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်
သသင်္ခါရိကဖြစ်လို့ သူများက တိုက်တွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရတဲ့ သဘောတွေပါလာတယ်...။ ဉပမာ မောင်အေးမြင့်ဟာ ဘီယာသောက်တာ ငါးပါးသီလမကျိုးပေါက်ပါဘူး သောက်စမ်းပါဆိုတဲ့ ဦးမောင်ကံရဲ့ တိုက်တွန်းစကားကို ယုံပြီးပျော်ပျော်ကြီးသောက်နေရင် ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်...။
၃) သောမနဿ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ ဝိပ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
တတိယစိတ်မှာတော့ သူများပစ္စည်းခိုးတာ မတရားနည်းနဲ့လိုချင်တာတွေဟာ အပြစ်ရှိမှန်းတော့သိတယ်...။ ဒါပေမယ့် မသက်သာလို့ ဒါမှမဟုတ်အရမ်းလိုချင်အားကြီးလို့ ယူမိတာမျိုးကို ဒိဌိဂတဝိပ္ပယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်...။
ဉပမာ လမ်းလျှောက်ရင်း သူများခြံဝင်းထဲက ငှက်ပျော်ခိုင်တွေတွေ့တော့ မလုပ်သင့်မှန်းသိပေမယ့် စားချင်တာနဲ့ ပိုင်ရှင်မသိအောင် ပျော်ရွှင်စွာ ခူးဆွတ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်...။ မကောင်းမှန်းသိပေမယ့် မိမိအလိုအလျောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကျူးလွန်မိရင် သောမနဿ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ ဝိပ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်ဖြစ်တယ်....။
၄) သောမနဿ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ ဝိပ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်
သသင်္ခါရိကဆိုတော့ သူများကတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်.....။ ဉပမာ လမ်းလျှောက်ရင်း သူများခြံထဲက နှင်းဆီပန်းကို မခူးကောင်းဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် အတူပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းက တိုက်တွန်းလို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆွတ်ခူးရင် ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်....။
၅) ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ သမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
ဉပမာ နှင်းဆီပန်းလေးကိုတွေ့တော့ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာမရှိဘဲ ပန်ချင်လို့ ဆွတ်ခူးတဲ့အခါ ...။ ဒီအခါမှာ အလယ်အလတ်ခံစားမှုရှိလို့သာ ဉပေက္ခာသဟဂုတ် ၊ တပ်မက်လိုချင်တယ်ဆိုတာအပြစ်ရှိမှန်းမဆင်ခြင်မိလို့ ဒိဌိဂတသမ္ပယုတ် မည်သူတစ်ဦးကမှာ တိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်ဆွတ်ခူးလို့ အသင်္ခါရိက ဒါကြောင့်မို့ ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ သမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ် ဖြစ်နေတယ်...။
၆) ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ သမ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်
ဈေးထဲဆွယ်တာဆိုင်လေးရောက်တော့ လိုချင်တပ်မက်စိတ်လေးဟာ အကိုလ်ဖြစ်မှန်းတော့သိတယ်...။ ဒါပေမယ့်ဆိုင်ရှင်က တစ်ထည်လောက်အားပေးပါဦးလို့ပြောတာနဲ့ ဆောင်းမှာလိုမှာဆိုပြီး ဆွယ်တာအင်္ကျီလေးတစ်ထည်ဝယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုလည်း ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်...။
၇) ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ ဝိပ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
အလယ်အလတ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်း သိပေမယ့် ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းဘဲ လုပ်မိတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်....။
၈) ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဒိဌိဂတ ဝိပ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်
အလယ်အလတ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်း သိပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဉီးကတိုက်တွန်းလို့ လုပ်မိတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်....။
ဒေါမနဿ သဟဂုတ် ပဋိဃ သမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်
စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တကွ ဒေါသနှင့်ယှဉ်ပြီး တိုက်တွန်းမှု မပါသောစိတ်...။
ဒေါမနဿမှာ ဒုက မကောင်းတာ၊ မနက စိတ်၊ မကောင်းသော စိတ်ကိုပြောတာ။ စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေတာ မပျော်ရွှင်ရတာကို ဒေါမနဿလို့ခေါ်တယ်...။ ပဋိဃ ဆိုတာ ခက်ထန်တဲ့ အမျက်ဒေါသဆိုပေမယ့် အဘိဓမ္မာမှာ ကြောက်ရွံ့စိတ် အားငယ်တာလည်း ဒေါသပဲ....။ သူကျတော့ ခက်ထန်တာမျိုးမဟုတ်လို့ ဆုတ်နစ်သောဒါသ Passion Aversion လို့လဲဆိုနိုင်တယ်...။
ဉပမာ။ ။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းဘဲ မကျေမချမ်းနဲ့ ပူလောင်သလိုဖြစ်လာတော့ ဒေါမနဿ သဟဂုတ် ပဋိဃ သမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိကစိတ်ဖြစ်တယ်...။
ဒေါမနဿ သဟဂုတ် ပဋိဃ သမ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်
စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တကွ ဒေါသနှင့်ယှဉ်ပြီး တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်...။
ဉပမာ။ ။ မြို့မဈေးကအပြန် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဒီလောက်ခရီးလေးကို တစ်ရာလောက်ပဲပေးသင့်တာ အခု တစ်ထောင်တောင်ပေးရတာများတာပေါ့ဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ မကျေမနပ်နဲ့ ဒေါသဖြစ်လာရင် ဒေါမနဿ သဟဂုတ် ပဋိဃ သမ္ပယုတ် သသင်္ခါရိကစိတ်ဖြစ်တယ်...။
လောဘနဲ့ဒေါသမှာ တူညီတာ သူတို့ဖြစ်တိုင်း အာရုံသဘောကို အမှန် မသိတဲ့ မောဟလည်း အမြဲတွဲပါနေလို့ သူတို့ကို အပြစ်နှစ်ခွရှိတဲ့ ဒွိဟစိတ် Double rooted consciousness လို့ခေါ်တယ်...။
ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဝိစိကိစာ္ဆ သမ္ပယုတ်စိတ်
ဝမ်းသာဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဘဲ ယုံမှားသံသယနှင့် ယှဉ်သောစိတ်...။
ဉပမာ။ ။ ဘုရား တရား သံဃာ ဆိုတာ တကယ် အားကိုးရာမှ ဟုတ်ပါ့မလားလို့ ယုံမှားတာ ၊ သစ္စာလေးပါးနဲ့ ကံ ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံမှားတာမျိုးပါ...ရင်ထဲမှာ ဒွိဟစိတ်တွေဝင်လာတာပါ...။ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတာ သီလစောင့်ထိန်းတာ အကျိုးရှိရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်နေရင် ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဝိစိကိစာ္ဆ သမ္ပယုတ်စိတ် ဖြစ်တယ်...။
ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဉဒ္ဓစ္စသမ္ပယုတ်စိတ်
ဝမ်းသာဝမ်းနည်းမရှိဘဲ ပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သောစိတ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်...။ ဉဒ္ဓစ္စကပျံ့လွင့်ခြင်းကိုပြောတာပါ...။ ဉဒ်ဆိုတာ အထက် Up or Above၊ ဓစ္စဆိုတာ လှုပ်နေတာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်...။ အထက်မှာလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ စိတ်က အာရုံနှင့်မကပ်ဘဲ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေတာ တရားထိုင်ခါစဆိုလည်း စိတ်က ကိုယ်ထားချင်တဲ့ နှာသီးဖျားမှာမရှိဘဲ ပျံ့လွင့်နေတာမျိုးကိုခေါ်တာပါ...။
ဉပမာ။ ။ ဆေးပညာဂျာနယ်ဖတ်နေပေမယ့် ဘယ်လိုမှ စိတ်စုစည်းလို့မရဘဲ စိတ်တွေ ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်တာ ဉပေက္ခာ သဟဂုတ် ဉဒ္ဓစ္စသမ္ပယုတ်စိတ် ဖြစ်တယ်...။
စိတ်(၈၉)ပါးလုံးကို နားလည်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်မှာ လောဘ ဒေါသ မောဟ စတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တိုင်း သတိထားမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်...။ ဒီအခါမှာ တဖြည်းဖြည်းမကောင်းတာတွေ မလုပ်မိတော့ဘဲ ကောင်းတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ပဲနေသွားလို့ရသွားမှာပါ....။
အသင်္ခါရိကစိတ် = တိုက်တွန်းပြုပြင်မှုမပါဘဲ ( ထက်မြက်သည့်စိတ် )
သသင်္ခါရိကစိတ် = တိုက်တွန်းပြုပြင်မှုကြောင့်ဖြစ်သောစိတ် ( ထိုင်းမှိုင်းသည့်စိတ် )
ဒိဌိဂတသမ္ပယုတ် = အယူမှားခြင်းနှင့်ယှဉ်လျက် ( ကံ ကံ၏အကျိုးကိုမယုံ )
ဒိဌိဂတဝိပ္ပယုတ် = အယူမှားခြင်းနှင့်မယှဉ်ဘဲ ( ကံ ကံ၏အကျိုးကိုယုံ )
ဉပက္ခာ သဟဂုတ် = ဝမ်းမြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းမဖြစ်ဘဲ
သောမနဿ = ဝမ်းမြောက်ခြင်း
ဒေါမနဿ = စိတ်ဆင်းရဲခြင်း
ပဋိဃ = အမျက်ဒေါသ
ဉဒ္ဓစ္စ = ပျံ့လွင့်ခြင်း
မှတ်ချက်။ ။ ခွဲစိတ်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိန်လင်း၏ ရွှေစင်မြင်းမိုရ်အဘိဓမ္မာစာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ပါသည်...။ ကျွန်မလေ့လာပြီးသလောက် မှတ်သားထားသည်များကို သဘောပေါက်လွယ်အောင် အပိုင်းခွဲပြီး ဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြပေးပါဦးမယ်....။
Posted by Cameron at 14:21 No comments:
အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ မိုးညနေခင်းတစ်ခုမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာက ကွဲကွာသွားခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ဖို့ ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်နေခဲ့မိတယ်.....။
ဟိုအရင်အချိန်က သူ့ကို ရည်းစားစကားစပြောတုန်းကလိုခံစားမှုမျိုးရနေတုန်း....။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်က သူနဲ့တွေ့ဖို့ ကျွန်တော်တစ်ခါ ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်...။ သူ့ဆီက ဘာပြန်စာမှမရခဲ့လို့ သူကျွန်တော့်ကို နာကျည်းမုန်းတီးသွားခဲ့ပြီလို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်....။ တကယ်ဆို အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ သူနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ မသင့်မှန်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်...။ ခုကလည်း သူကိုင်တိုင် ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ချင်လို့ ဆက်သွယ်လာလို့သာ ကျွန်တော့်ဆန္ဒတွေပြည့်ခဲ့ရတာ...။
သူနှစ်သက်တယ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောခဲ့ဖူးတဲ့ သစ်တောရနံ့ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်းနဲ့ ဂီတသံခပ်တိုးတိုးလေးဖွင့်ထားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဆုံကြတယ်...။ ပတ်ဝန်းကျင်အပံ့အပိုးအပြည့်အစုံနဲ့ စတွေ့တွေ့ချင်း နှုတ်ဆက်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောနိုင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်....။ သူက အလည်ခွဲပခုံးကျော်ကျော်လောက်ရှည်တဲ့ဆံပင်ကို ကလစ်နဲ့တစ်ဖက်အပေါ်ကိုလှန်တင်ပြီးညှပ်ထားတယ်....။ တစ်ဖက်က မျက်နှာတစ်ခြမ်းအုပ်လုလု....။ အနက်ခံမှာ ရောင်စုံအချိတ်လှိုင်းတွေပါတဲ့ မြန်မာချည်လုံချည်ကို အနက်ရောင် လက်စကရင်ဖုံးနဲ့ ကျွန်တော်အမြဲသဘောကျခဲ့တဲ့ ခုထိလဲ သဘောကျနေဆဲသူ့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု...။ ဘာမှလိမ်းခြယ်မထားတဲ့ မျက်နှာချောချောညိုညက်ညက်အသားရေမှာ နှင်းဆီရင့်ရောင်နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးက ထင်းခနဲ....။ သူ့မျက်လုံးအကြည့်တွေက ခုချိန်ထိ အားကောင်းစွာတောက်ပနေတုန်း....။
ကျွန်တော့်ပုံစံကတော့ သူ့အတွက် တော်တော်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်....။ နံ့သာဖျော့ရောင် ရှပ်လက်ရှည်နဲ့ ကချင်ပုဆိုးဆိုတာ သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်တုန်းက ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ မဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးတဲ့ စတိုင်လ်....။ ဆံပင်တိုကပ်ကပ်ကိုလည်း သူခုမှမြင်ဖူးတာ.....။ အချိန်ကာလတစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်ကို အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားနိုင်တာကို ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်ထင်ထင်တွေးမိ သတိထားမိလိုက်တယ်....။
ကွဲကွာခြင်းဆိုတဲ့ နံရံတစ်ခု ခေတ္တခဏပြိုဆင်းသွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ဟာ မမြင်ဖူးခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်တွေလို မှင်သက်ငေးမောကြည့်နေကြတယ်...။
" ဘာသောက်မလဲ တစ်ခုခုမှာကြမယ်လေ...."
သူကစပြီးမေးတော့မှ ကျွန်တော်အိပ်မက်လန်းနိုးသူတစ်ယောက်လို ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ ဂုတ်ပိုးကဆံပင်ကို သပ်နေလိုက်သေးတယ်....။ ဒါကလည်း ကျွန်တော့် အပြုအမူစရိုက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါ....။ ပြီးတော့ ဒီလိုခံစားမှုမျိုးကိုလည်း ပထမဆုံးအကြိမ်ခံစားဖူးခြင်းပဲ....။
"ကိုယ်သောက်နေကျ Cappuccino ပဲမှာလိုက်ပါ..."
ကျွန်တော်တို့ ဟိုအရင် ကော်ဖီဆိုင်အတူထိုင်တိုင်း အခါးမသောက်နိုင်လို့သူက ကျွန်တော့်အတွက် နို့များတဲ့ Cappuccino ကိုမှာပေးနေကျ ဒါတောင် တခါတလေ ခါးတယ်ဆိုပြီး သကြားထည့်သောက်တတ်သေးတာ...။ သူက သူသောက်နေကျ Americano တစ်ခွက်မှာလိုက်တယ်....။
" စားစရာတွေ မမှာတော့ဘူးနော် ကော်ဖီသောက်ရင်း စိတ်ကူးပေါက်ရင် နောက်တစ်ဆိုင်မှာ တစ်ခုခုသွားစားရအောင်လို့..."
သူက သူ့ Plan ကိုကြိုပြောပြီး ချိုချိုမြမြနဲ့ပြုံးလိုက်သေးတယ်....။
"အရင်လိုပဲ အစားတွေအများကြီးစားနေတုန်းပဲလား ဒါပေမယ့် ခုထိ ဒီတိုင်းလေးပဲ ဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူး လူကြီးနဲနဲဆန်သွားတာပဲရှိတာ..."
"ဟုတ်လား အင်း... စိတ်ချမ်းသာလို့နေမှာပေါ့..." ရယ်မောသံဆွတ်ပြီး သူပြန်ပြောတဲ့လေသံကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ..ရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်လို သူ့ကိုမကြည့်ရဲဘဲ သကြားခွက်တွေဆီကို အကြည့်ပို့ထားလိုက်တယ်...။
"ဘာလို့ ကိုယ်နဲ့တွေ့ချင်တာလဲ.... လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်တုန်းက မင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ ကိုယ်အီးမေးလ်ပို့ထားတုန်းက ဘာမှတောင်ပြန်မပြောခဲ့ပဲနဲ့..."
ကျွန်တော်အဲလိုပြောမယ်ဆိုတာ သူကြိုသိထားပုံရတယ် လက်နှစ်ဖက်ကိုယှက်ပြီး မေးတင်ထားရင်း ကျွန်တော့်ကို ရီရီဝေဝေနဲ့ပြန်ကြည့်နေတယ်....။
"ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး... မနေ့ညက ကျွန်မ အိပ်မက်မက်တယ်...တစ်ခါမှ ဒီလိုမမက်ဖူးဘူး.... အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုကိုက အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ကော်ဖီအတူလာသောက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်....ပြီးတော့ မျက်နှာလဲမကောင်းဘူး..."
"ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုတွေ့ဖို့ ချိန်းလိုက်တယ်ဆိုပါတော့..."
"အင်း ဟုတ်တယ်.... ကိုကိုနေကောင်းတယ်မဟုတ်လား...."
သူ အဲလိုမေးတော့ ကျွန်တော်တစ်ချက်ရယ်လိုက်တယ်.... ။ ကျွန်တော့်ရယ်သံတွေက ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်...။
"ကိုယ်နေကောင်းပါတယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဒေါင်ဒေါင်မြည်.... အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်စွဲလို့မက်တာပါ ကိုယ့်ကို စိတ်ပူသွားလို့ခေါ်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်လား..... ဒီလိုဆို အဲလိုအိပ်မက်တွေ ခဏခဏမက်ပါစေလို့ မဟိရာဇနတ်ဆီ ဆုတောင်းရမယ်....။
"မသိဘူးလား ကလေးရဲ့ အဲဒါ လူတွေရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ် ၁၂ ပါးထဲက အိပ်မက်ပေးတဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်တစ်ပါးပေါ့..."
"အော် အဲလိုလား..." အရင်လို သူ့ကို ကလေးလို့ အမှတ်တမဲ့ ခေါ်မိသွားလို့ သူမသိအောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြိတ်သဘောကျသေးတယ်....။ ပြီးတော့ သူ့မျက်လုံးတွေလက်ခနဲ ဖြစ်သွားတာကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်သေးတယ်....။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပြန်ဆုံတဲ့ ကော်ဖီစကားဝိုင်းလေးက စိုပြေစပြုလာပြီ....။
"မမမြတ်ရော နေကောင်းလား...ကိုကိုတို့ ကလေးရော ရနေပြီလား..."
သူ့မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်တော် အံ့အားသင့်ရသေးတယ်....။ သူကျွန်တော့်အကြောင်း သေချာမသိထားဘူးဘဲ...။
"မင်း တကယ် ဘာမှ မသိခဲ့တာလား မမမြတ်နဲ့ ကိုယ်လက်မထပ်ဖြစ်ဘူးလေ....အဲချိန်ကတည်းက ကိုယ်နိုင်ငံခြားထွက်သွားခဲ့တာ ဒီကို ပြန်ရောက်တာ သုံးနှစ်ကျော်ပဲရှိဉီးမှာ ကိုယ်မင်းကို အဲတုန်းက ပြန်ရောက်စတွေ့ချင်လို့ စာရေးခဲ့တာ မင်းစာမပြန်တော့ ကိုယ်နဲ့မတွေ့ချင်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာ...."
"အို.... ဟုတ်လား ကျွန်မလဲ မောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီး တခြားမြို့ပြောင်းသွားကတည်းက ကိုကိုတို့ သတင်းကို ဘာမှမကြားတော့တာ ဒါဆို ခု ကိုကိုက....?
ကျွန်တော် ကော်ဖီတစ်ကျိုက်ကျိုက်ရင်း..... " ကိုယ်ဒီမှာလေ...မင်းရှေ့မှာ"
"ကိုယ်ခုထိ Single ...ပါပဲ"
ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတာကို ကော်ဖီငုံ့သောက်နေရင်း ပြန်မော့ကြည့်လာတဲ့ သူနဲ့ကျွန်တော် အကြည့်ချင်းဆုံမိသွားတယ်...။
"ကလေးမျက်လုံးတွေက အရင်လို တောက်ပပြီး ညှို့အားပြင်းတုန်းပဲ...."
ကျွန်တော့်စကားကြောင့် သူပြုံးလိုက်ဟန်က မျှော်လင့်မထားဘဲ တအံ့တဩ...။
"ကော်ဖီသောက်ပြီးရင် ကျွန်မတို့ တစ်ခုခုသွားစားရအောင်လေ...ကိုကိုဘာစားချင်လဲ ကျွန်မလိုက်ကျွေးမယ်"လို့ ချက်ချင်းပဲ သိသိသာသာ စကားလွဲလိုက်တယ်....။
"မင်း အမျိုးသားရော မင်းကိုယ်နဲ့လာတွေ့တာကို ဘာမှမပြောဘူးလား"
"သူ မြို့မှာကျန်ခဲ့တယ်... ကျွန်မက ဒီကို ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရောက်နေတာ ကိုကိုနဲ့တွေ့မယ်လို့သူ့ကို ပြောထားပါတယ် သူခွင့်ပြုပါတယ်..."
" အဆင်ပြေကြတယ်မဟုတ်လား..." လို့ ကျွန်တော် မချင့်မရဲလေး စူးစမ်းကြည့်မိတယ်....။
"ဟုတ်‌ ပြေပါတယ် မောင်က ကျွန်မကို သိပ်ချစ်ပြီး ဂရုစိုက်ပါတယ်.." သူ့အမျိုးသားကို သူကမောင်လို့ခေါ်သတဲ့လား...။ ပြန်တွေးမိရင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ခပ်ဖွဖွရယ်မိသွားခဲ့တယ်...။ ရည်းစားဘဝတုန်းက ကျွန်တော်က သူ့ကို မောင်လို့ခေါ်စေချင်ခဲ့တာ...။ ကျွန်တော် အဲလိုခေါ်ခံချင်တဲ့အကြောင်းလည်း သူ့ကို တစ်ခါမှမပြောပြခဲ့ဖူးပါဘူး....။
"အင်း....ကောင်းပါတယ် မင်းပျော်ရင် ကိုယ်ဝမ်းသာပါတယ်...." လို့ လောကွတ်ဆန်ဆန် ပြောထွက်လိုက်ပေမယ့် သူ့အဖြေကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲစူးနစ်ပြီးခံစားသွားလိုက်ရတယ်...။ အဲဒီဝေဒနာဟာ ကျွန်တော်နဲ့ မသက်ဆိုင်တော့တဲ့ ဘယ်တော့မှလဲ မသက်ဆိုင်တော့မယ့်သူတစ်ယောက်ကို ဝန်တိုခြင်းလား...ကျွန်တော်မခွဲခြားတတ်ခဲ့ဘူး....။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ နည်းနည်းပါးပါးပြောကြပြီး BBQ ဆိုင်တစ်ခုကို ထပ်ကူးကြတယ်....။
"ကိုကို အရင်လို ဘီယာမသောက်တော့ဘူးဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ကော့တေးတော့ သောက်ကြမယ်လေနော်..."
သူစိတ်ကြိုက် အကင်မျိုးစုံ အရည်သောက်တစ်မျိုး အသုပ်တချို့နဲ့ ထမင်းဖြူရယ် ကော့တေးနှစ်ခွက်ရယ်မှာလိုက်တယ်....။
"ကိုကို များများစားနော်..." သူက ကျွန်တော့်ပန်းကန်ထဲ အကင်တွေ အသုပ်တွေကို အရင်လို ကျွန်တော်စားဖို့ ဂရုတစိုက်ထည့်ပေးနေတာကို ကျွန်တော် အသာလေးငြိမ်ပြီးကြည့်နေတယ်....။
"ကိုကို တို့စိတို့နန့်ပဲစားနေမှာစိုးလို့..." တဲ့..... အဲဒီစကားလေးကိုပြောလိုက်တဲ့ သူ့အမူအရာလေးက ချစ်စရာ...။
ကျွန်တော်တို့ ရည်းစားဘဝတုန်းက ကျွန်တော်က အစားသိပ်မစားဘဲ ဘီယာပဲလှိမ့်သောက်လို့ သူပွစိပွစိပြောခဲ့ဖူးတာ ရန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြတာကို သွားသတိရမိတယ်....။ အစာမရှိတော့ ပိုမူးပြီး သူက များသောအားဖြင့် ကျွန်တော့်ကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ရတာချည်းပဲ....။
ခုတော့ ကျွန်တော်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်တုန်းက သွေးဆူတတ်တဲ့ ထင်ရာစိုင်း ဇွတ်တရွတ်လုပ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကနေ သူ့ရှေ့မှာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ လူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာ တွေးကြည့်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မယုံချင်စရာ....။
အပြန် သူနေတဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့နီးလို့ ကျွန်တော်တို့အတူလမ်းလျှောက်ပြန်ကြတယ်....။ ဒီတကြိမ်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သူ့ကို အိမ်ပြန်ပို့ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်....။
"ကိုကို့လက်ကို တွဲလျှောက်ချင်တယ်" လို့သူပြောတော့ သူနဲ့ဘေးချင်ယှဉ်လျှောက်လာရင်းက ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ ခေတ္တခဏ ရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်....။ သူလက်ကမ်းပေးတော့ ကျွန်တော်တွေဝေမနေဘဲ သူ့လက်ဖဝါးနုနုထွေးထွေးနွေးနွေးလေးကို ခပ်ဖျစ်ဖျစ်ဆုတ်ကိုင်လိုက်တယ်....။ အဲဒီညက ကောင်းကင်ယံမှာ လပြည့်ဝန်းက ပြည့်ပြည့်ဝန်းဝန်းကြီးကိုသာလို့.... ။ လမ်းမီးတိုင်တွေမှိန်လို့လားမသိ လရောင်သိသိသာသာ ဖြာကျတာကို အေးမြစွာခံစားလိုက်ရတယ်....။
သူ့တိုက်ရှေ့ရောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့ ဘာစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ တစ်လမ်းလုံးနှုတ်ဆိတ်လာခဲ့ကြတယ်...။ တိုက်ရှေ့ရောက်တော့မှ....
"ကိုယ် ကားငှားပြန်လိုက်ပါ့မယ် မင်းအပေါ်တက်တော့လေ...." လို့ဆိုလိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော်ခုချိန်ထိ သူ့လက်ကိုမလွှတ်သေးဘဲ ကိုင်ထားမိတုန်း.....။ ရုတ်တရက် သူလက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်အောက်ကနေလျှိုပြီး ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်လိုက်တယ်....။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် တစ်ချက်ယိုင်ပြီး နောက်ဖက်ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်လိုက်မိတယ်....။ ကျွန်တော်အလိုက်သင့် သူ့ကို ပြန်ပွေ့ဖက်ထားလိုက်တယ်....။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်မှာ ပါးပြင်အပ်ထားတဲ့ သူ ...ကျွန်တော့်ဘယ်ဖက်ရင်ဘတ်ထဲက တိုးတိတ်စွာလှုပ်ခတ်နေတဲ့ ရင်ခုန်သံကို အတိုင်းသားကြားနေရလောက်ပြီ....။
"ကလေး တခုခုဖြစ်လို့လား.." သူ့နားနား တိုးတိုးမေးလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်အသံတွေက အက်ရှရှ...။
"ကျွန်မဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.... ဒီတိုင်းပဲ ကိုကို့ကို ခဏဖက်ထားချင်လို့..." လို့ပြန်ဖြေတဲ့ သူ့စကားကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်ဝိညာဉ်တွေ စက္ကန့်ပိုင်းလေးလွင့်သွားသလို တလောကလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲပဲ ရှိနေသလို ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားကြတယ်....။
"အဆင်ပြေလား....." လို့မေးလိုက်ရင်း သူ့ဆံပင်တွေကိုပွတ်သပ်ပေးရင်း တစ်ချက်နမ်းရှိုက်လိုက်မိတယ်....။
" ကျွန်မတို့ ဒီတစ်ခေါက်ဆုံတွေ့မှုဟာ နောက်ဆုံးလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာလေ...." လို့ သူ ခပ်တိုးတိုးပြန်ပြောတယ်...။
"ဘာလို့ အဲလိုပြောလဲ ကိုယ်ခုဒီမှာပြန်နေပြီပဲ မင်းဒီကို တခေါက်ရောက်တဲ့အခါ ကိုယ်တို့တွေ့လို့ရတာပဲ..."
"မသိဘူး..... ကျွန်မသိတာ ဒီတစ်ခေါက် ကိုကိုနဲ့တွေ့ချင်တယ် လက်ရှိအချိန်လောက်ဘာမှ မသေချာဘူးလေ..."
"မင်းက ခုတော့လဲ ဟိုအရင်ကလို ကလေးလေးတစ်ယောက်အတိုင်းပါပဲလား.....
ကျွန်တော့်စကားမဆုံးခင် သူ့လက်ချောင်းလေးတွေက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို ဆက်မပြောဖို့ ပိတ်ကာလိုက်တယ်....။
"ဘာမှ ပြင်ဆင်မရတော့တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ပြန်မပြောပါနဲ့တော့ ပြန်တော့နော် ကိုကို ဒီညအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..."
"ကိုယ်ကသာ ကလေးကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ ကိုယ်က မင်းကို မင်းကိုယ်နဲ့မတွေ့ချင်တဲ့အချိန်ကတည်းက တွေ့ချင်နေခဲ့တာပါ..."
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....သူ့ကိုရော ဒီလိုအခြေနေအချိန်ခါမျိုးကို ဖန်တီးပေးတဲ့ ကံကြမ္မာကိုရော အားလုံး... အားလုံးကို တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....။
ပြန်ဆုံခွင့် ...တခဏတာအတွက် ကျွန်တော် တစ်သက်စာ ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်....။ ကျွန်တော့်အတ္တနဲ့အချစ်တွေအတွက် သူနားလည်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်........။
Posted by Cameron at 01:59 No comments: